यस्ता छन् दिउँसो सुत्नुको फाइदा – Peacepokhara.com
ताजा अपडेट आज अर्मलाको ठुलीवेसी फाटमा १४ औं रोपाई महोत्सब | 29 Jun 2017 आज असार १५, धान दिवस | 29 Jun 2017 पोखरामा स्मार्ट लाइसेन्स आयो तर आवेदक लिन आएनन् | 28 Jun 2017 हातले बम समातेर फ्याक्ने सहासी हबल्दारलाई पुरस्कृत गर्ने गृहमन्त्रीको घोषणा | 28 Jun 2017 दोस्रो चरणको चुनावमा ७० प्रतिशत मत खसेको प्रारम्भिक अनुमान | 28 Jun 2017 यस्ता छन् दिउँसो सुत्नुको फाइदा 17 Oct 2016 Leaveacomment एजेन्सी । हामी दिउँसोको समयमा सुत्नुलाई ‘अल्छीपना’को संज्ञा दिन्छौं । तर, दिउँसो सुत्नु साँच्चै अल्छीपना नै हो त ? हो भने एकछिन विचार गरौं त ! तपाईंको आसपासमा रहेका बिरालो तथा कुकुर पनि दिनमा कयौं पटक निदाइरहेका देखिन्छन् । तर, उनीहरु जत्तिको फुर्तिला पनि अरु कोही हुँदैनन् ।
शरीरलाई जसरी खाना र पानीको आवश्यकता पर्छ, त्यति नै आरामको पनि खाँचो हुन्छ । अहिलेको व्यस्त जीवनमा हामी दिनभर भागदौड गर्छौं, तर शरीरले त्यस अनुसारको आराम नपाउँदा थकान महसुस हुन्छ । जसले गर्दा हाम्रो शरीर थकित हुनुका साथै दिमाग बोधो हुन पुग्छ र सोच्ने शक्ति क्षीण हुँदै जान्छ ।
त्यसको ठीक विपरीत कहिलेकाहीँ जब हामी दिउँसो सुत्छौं, त्यतिबेला हामी आफूलाई फुर्तिलो महसुस गर्छौं । यसको अर्थ दिनमा केही क्षण सुत्नु अल्छीपना नभएर यसले तपाईंको स्वास्थ्यमा फाइदा पुर्‍याउँछ ।
त्यसो त हाम्रो काम तथा व्यस्तताका कारण दिउँसोको समयमा सुत्नु त्यति सजिलो छैन । तर, शरीरले आराम खोजेको बेला आराम दिनुले पक्कै पनि महत्व राख्छ ।
अध्ययन अनुसार दिउँसो सुत्नुका फाइदाहरू यस्ता छन् : दिमागलाई तेजिलो बनाउँछ
हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, पर्याप्त निद्रा नपुगेको खण्डमा हाम्रो दैनिक क्रियाकलापमा समेत असर पर्छ । यसले हाम्रो सोच्ने र सम्झने क्षमतामा समेत ह्रास ल्याउाछ । यसैले यदि तपाईँसँग समय छ भने दिनको समयमा एक क्षणको निद्रा तपाईंको लागि फाइदाजनक हुने गर्छ । दिनमा ६० देखि ९० मिनेटको सुताइले मात्र पनि आउँदो २४ घण्टाको लागि तपाईंलाई मानसिक स्फूर्ति दिलाउँछ ।
मुटु स्वस्थ रहन्छ
हाबर्ड विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताहरुले पत्ता लगाए अनुसार दिउँसो सुत्ने अधिकांश मानिसमा मुटुको समस्या कम हुने गर्छ । यसले शरीरको थकान समेत घटाउँछ । त्यसैले, साताको कम्तीमा तीन दिन दिउँसो करिब ३० मिनेट तकियामा हात राखेर सुत्ने प्रयास गरौं । यसले तपाईंको स्वास्थ्यमा फाइदा पुर्‍याउँछ ।
थकानले तनाव सिर्जना गर्छ, जसले गर्दा तपाईं अझ बढी थकित महसुस गर्नुहुन्छ । दिउँसोको सुताइले तपाईंलाई यी सबै कुराबाट टाढा राख्न मद्दत गर्छ । वैज्ञानिकहरुले पत्ता लगाए अनुसार दिउासो नसुत्ने मानिसमा तनाव उत्पन्न गराउने हर्मोन स्वतः बढ्ने गर्छ ।
खानपानमा सुधार आउँछ
थकित महसुस भएको बेला तपाईंलाई भोक लागेको छ भने तपाईँ सबैभन्दा पहिले जे भेट्यो त्यही खानुहुन्छ । यसबाट बच्ने सबैभन्दा राम्रो उपाय भनेको केहीबेरको सुताइ नै हो । केही क्षणको सुताइले तपाईंको शरीरलाई थप ऊर्जा मिल्छ नै, यसले तपाईंलाई हानिकारक खाना खानबाट समेत जोगाउँछ । अझ १०र१५ मनेटको आरामले तपाईं आफूलाई के खाँदा राम्रो हुन्छ भनेर सोच्न सक्ने स्थितिमा पुग्नुहुन्छ ।
हुन त सुत्नु भनेको भौतिक कामबाट केही क्षण विश्राम लिनु पनि हो । तर,अनुसन्धानकर्ताहरुले जनाए अनुसार, आराम नगर्ने धावकहरुको तुलनामा तालिमको बीचमा केही क्षण सुत्ने धावकहरुको नतिजा राम्रो पाइयो ।उनीहरुमा ऊर्जा र स्फूर्ति बढेको पाइयो । यसर्थ बल, प्रतिक्रिया तथा गति सबै कुरामा सुधार ल्याउन निद्रा अपरिहार्य छ । एजेन्सीको सहयोगमा
2016-10-17 Related Articles एसएलसीमा डी र ई ग्रेड ल्याउनेको पुरक परीक्षा साउन १४ देखि (परीक्षा तालिकासहित) 16 Jun 2016
संघीयता कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु,थापा असन्तुष्ट,मन्त्रीपरिषद् बैंठकनै वहिस्कार 08 Apr 2016
सहमतिय सकार गठनको संभाबना छैन : बिजुक्छे 04 Oct 2015